#Adam Barre: “Maalintii waxaan ahay Kenyaan, habeenkiina Soomaali” » Axadle | Get Latest News From Horn of Africa
#Adam Barre: “Maalintii waxaan ahay Kenyaan, habeenkiina Soomaali”
Hoggaamiyaha aqlabiyadda Baarlamaanka Kenya Adam Barre Ducaale ayaa mar kale ka hadlay doodda Kenya ay muranka ku gelineyso biyaha Soomaaliya.
Adam Barre Ducaale oo ka hadlayay arrintan ayaa sheegay in marnaba uusan oggolaaneyn in taako ka mid ah biyaha ama dhulka Kenya ay qaadato dowlad deris la ah Kenya sida Soomaaliya, Itoobiya ama Koofurta Suudaan.
Adam Barre ayaa sheegay in uu isagu yahay qofka saddexaad ee ugu sarreeya dalka Kenya dadka Soomaalida ah faa’idada ay ku qabaan Kenyana aysan ku qabin dalalka deriska ah.
Hoggaamiyaha aqlabiyadda Baarlamaanka Kenya Adam Barre Ducaale ayaa yiri “ aniga maalinkii waxaan ahay Kenyaan Habeenkiina waxaan ahay Soomaaliya, Madaxweyne Farmaajo iyo madaxda kale habeenkii waa is wacnaa, waa wada shaahi karnaa”.
Waxaa uu raalli gelin ka bixiyay hadalkii uu todobaadkii hore sheegay oo uu xusay in dad badan ay si kale u fasireen, isaga oo sheegay in arrintan la xallin doono.